Sidee loo afduubay aqoonyahan C/wahaab iyo su'aalaha askarta Uhuru weydiiyeen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sidee loo afduubay aqoonyahan C/wahaab iyo su’aalaha askarta Uhuru weydiiyeen
Aqoonyahan C/Wahaab sh Maxamed ayaa la waayay muddo gaaraysa 12 maalmood markii duhur cad askarta Uhuru ka kaxaysatay suuqa magalada Nayroobi gaadhina ku tuurteen bishii hore. Haddaba halkee la geeyay markii la afduubtey.
”Ujeedada ugu horeysay waxay ahayd in la dilo kadibna meydkiisa lagu tuuro badda ama webiga ayay tiri akhbaar ay heshay jariirad ka soo baxda Kiiniya.
Waxase badbaabiyay buuqii ka dhashay afduubkiisa iyo arinta oo degdeg caan u noqotey. ”RABI iyaa i badbaadiyay ee teelo la iima dhigan ayuu yiri aqoonyahan C/wahaab.
Waxkasta oo dilaagu isku dayaan ugu dambeyn kan ku dilaya iyo kan nafta kuu deynaya waa RABI ayuu raaciyay. Askarta Uhuru soo direy oo afar ahaa ayaa aqoonyahanka qabtey isagoo ka gudbaya wado uu saaxiibkii ku sugayay dhinaca kale.
Inkastoo uu dagaalamay oo qayliyay haddana ma jirin cid u soo gurmata waxase jira dad iyagu taleefanada la booday markiiba oo duubey, waxase lagu qaatey gaadhiga oo markiiba xawaare kaga tagay meesha.
”Waxaan markiiba ogaadey in maanta ay ii dhmaatey oo lay dilayo ayuu yiri aqoonyahan C/Wahaab ayadoo mid askarta ka mida leeyahay anagaa qaladka leh maqashiinay dadka.
”Waxa marhore la iigu digey cambaaynta aan ku hayo mucaarad ku sheega Somaliya iyo Tigreega Itoobiya in naftiisu halis ku galayso laakiin waan iska indhatirey. Waxa markiiba la igu tuuray guri mudgi ah waana la iga tagay ayuu yiri C/wahaab.
Kadib waxa bilowday banaanbaxyo iyo idaacadaha aduunka oo ka hadla afduubkeyga, taas oo rajoweyn i gelisay. Somalida iyo ciidanka sirdoonka Kiiniya ayaa labaduba sheegay in dilka aqoonyahanka ay kuwada jireen Somali iyo Kiiniyaati.
Waxay ugu dambeyn ku heshiiyeen sadex boqol oo kun oo doolar. Waxa qolkii lagu tuurey soo gaaray turjumaa Kiiniyaati oo qoladii sirdoonku wadato.
”Su’aalaha la weydiiya ayaa waxa ku jirtey inuu wax ka ogyahay kiiska Ikraan Faarax oo ah gabadh maqan oo la sheegay in argagixisadu dishey. Waxa kale oo laygu celceliyay inaan is khilaafsanahay madax sare oo ka tirsan dawlada Somaliya ayuu yiri C/wahaab.
”Waad ka noqon kartaa dhalashada Kiiniya. Labada wadan ee Itoobiya iyo Somaliya waa ku raadinayaan makuu masaafurinaa ayay igu yiraaheen. Ugu dambeyn waa iga qanceen markii ceebtii ku dilaacday waxayna ii sheegeen inaanan hadlin haddii kale ku dilayaan.
Way i soo qaadeen waxay i siiyeen 3000 kun oo Kiiniyaati waxayna ii joojiyeen wado madow ah waxayna ugu yidhaaheen raac gaadhi Hindigaa haku geeyo gurigaaga.
Bajaajlihii ayaan 300 siiyay waxase i garan waayay waardiyii gurigayga sida aan u ekahay awgeed, waxaanse ku idhi waxaan deganhay guriga, waxa guriga yaala gaadhiga walaashay oo nalku u daaran yahay oo rabta inay baxdo mise waxay u jeedaa muuqaal
”Cabaar ayay igu dheganayd iyadoo u qaadanla, cabaar kadib ayay igu tidhi sug halkan aan wargeliyo aqalkee.
Soo akhrintii C/llaahi Warhaye